Tag: xeebta saddexaad ee dhijitaalka ah Martech Zone
Tag: xeebta saddexaad ee dhijitaalka ah
Dijital Saddexaad ee Xeebta ayaa la shaqeeyay Reachmail si loo aqoonsado dabeecadaha foosha xun iyo dhaqammada ugu xun ee ay soo bandhigeen suuqleyda emailka. Xogta ay qaabeeyeen waxay ku xiraysaa dabeecad kasta dabeecad dhaqameed caan ah oo xusuus leh si ay uga caawiso suuqleyda inay xusuustaan ​​oo ay la xiriiraan dhaqanka liita. Waxay sidoo kale ku dareen talo bixin ficil ah oo ku saabsan dhaqan xumada u rogi karta mid wanaagsan. Nasiib darrose, maahan in qof kasta oo mas'uul ka ah aaladaha suuqgeynta iimaylka uu si sax ah ugu isticmaalo. Waa suurtagal gebi ahaanba inaad sameysid hal ama dhowr